जुबा। एउटा अनौठो घटनामा दक्षिण सुडानमा एउटा भेडालाई एक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ।सुडानको आई रेडियोका अनुसार यस महिनाको सुरुमा दक्षिण सुडानमा ४५ वर्षीय अधियु चापिङलाई आक्रमण गरेपछि भेडालाई प्रहरी हिरासतमा लिइएको थियो। भेडाले चापिङलाई बारम्बार टाउकोमा हानेर उनको करङ भाँचिएको थियो। गम्भीर चोटका कारण ४५ वर्षीया महिलाको तत्काल मृत्यु भएको थियो। रुम्बेक इस्टको अक्युल योलमा भएको सो घटनापछि भेडालाई…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । शरीरबाट निस्कने दिसा र पिसाबको कुरा आउँदा मानिसहरूले प्रायः आफ्नो नाक र आँखा खुम्चाउने गर्छन् । यसलाई फोहोरको रूपमा मात्र होइन यसलाई अस्वच्छ पनि मानिन्छ । तर, हाम्रो शरीरबाट निस्कने यो फोहोर असाध्यै काम लाग्ने छ । यो यति शक्तिशाली छ कि यसले मानिसको भविष्य बचाउन सक्छ । अचम्म लाग्यो रु आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔँ । औसतमा, एक वयस्कले हरेक वर्ष ९१ केजी…विस्तृत समाचार »
अपराधका सत्य घटना २४ घण्टा हेर्नेलाई २४०० डलर
काठमाडौं । स्ट्रिमिङ सेवाले २४ घण्टासम्म अपराधका सत्य घटनामा आधारिक वृत्तचित्र हेर्न र अनुभवको जानकारी गराउनेलाई २४०० डलर प्रदान गर्ने भएको छ । ​मेगालान टिभीले भनेको छ, ‘यो हाम्रो अपराधका सत्य घटनामा आधारिक तेस्रो वार्षिकी हो ।’ यस किसिमको प्रस्ताव २०२० र २०२१ मा पनि गरिएको थियो । यो विजेता उमेदवारलाई २४०० डलर सित्तैमा प्रदान गरिएको थियो । तर, त्यति बेलाको प्रावधान भने हालको तुलनामा…विस्तृत समाचार »
२३ मंसिर, काठमाडौं । स्विट्जरल्याण्ड सरकारले सुसाइड मेसिनको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यो मेसिन बनाउने कम्पनीको दावीअनुसार यो मेसिनले कुनै पनि व्यक्तिलाई १ मिनेटभित्र कुनै पीडाबिना मृत्यु दिन सक्छ । यो मेसिन कफिनको आकारको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट अक्सिजन लेभल अत्याधिक कम गरिन्छ जसका कारण एक मिनेटभित्र मृत्यु हुन्छ । एक्जिट इन्टरनेशनल नामको संस्थाका निर्देशक डा. फिलिप निट्स्केले यो मृत्युको मेसिन बनाएका…विस्तृत समाचार »
६ मङ्सिर २०७८
एजेन्सि। आफ्नो प्यास शान्त र शरीरलाई हाइड्रेट राख्नका लागि मानिसहरु विभिनन प्रकारका पेय पदार्थ पिउन रुचाउँछन् तर तपाईंले कहिल्यै मानिसले आफ्नै पिसाब पिएको देख्नुभएको छ ? ५३ वर्षकी एक महिलाले उनलाई आफ्नो पिसाब पिउने बानी परेको र यसको स्वाद उनलाई कुनै स्याम्पेनजस्तो लाग्ने बताएकी छिन् । महिलाले पछिल्लो चार वर्षदेखि यस्तो गरिरहेकी छिन र उनलाई पानी पिउनुभन्दा पिसाब पिउन सजिलो लाग्ने बताएकी छिन् । द…विस्तृत समाचार »
शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको पेटबाट निकालियो मोबाईल
एक व्यक्ति निकै पेट दुखेपछि चिकित्सक कहाँ जान्छन् । केही घन्टापछि चिकित्सकले उनको पेटको एक्सरे गर्छन् । एक्सरे रिपोर्टमा ती व्यक्तिको पेटमा मोवाईल देखेपछि चिकित्सक नै चकित हुन्छन् । उनको तत्कालै शल्यक्रिया हुन्छ । यो हो पश्चिमी इजिप्टको आसवान युनिर्भसिटी अस्पतालको घटना । समाचार विवरणअनुसार ती व्यक्तिले ६ महिनाअगाडि एउटा मोबाईल फोन निलेका थिए । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट दिशामार्फत मोबाईल बाहिर निस्कने आशामा उनले कसैलाई पनि…विस्तृत समाचार »
कोरोनाबाट बच्न भन्दै विषालु सर्प खाएपछि.............
एजेन्सी । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न मानिस मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गरीरहेका छन् । तातो र झोलीलो पोषणयुक्त खानेकुरा खाने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उपाय अपनाउँदै आएका छन् । तर भारतका एक व्यक्ति भने अनौठो हर्कतबाट चर्चामा आएका छन् । भारत तमिलनाडुको मदुरै जिल्ला निवासी एक व्यक्तिले कोरोनाबाट बच्न सबै हद पार गरेका छन् । ५० बर्षिय वादिवेलु पेशाले किसान हुन् । उनी बिषालु सर्प खाएमा…विस्तृत समाचार »
​एउटा स्याउ बराबर तौल भएकी ‘विश्वकै सानो’ शिशु १३ महिनापछि घर फर्किइन्
एजेन्सि । जन्मिँदा विश्वकै सानो भनिएकी एक शिशु १३ महिना सिंगापुरको एक अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएकी छन् । क्वेक यू सुवान जन्मिदा मात्र २१२ ग्राम, करिब एउटा स्याउको तौल बराबर, थिइन् । उनको उचाइ मात्र २४ सेन्टिमिटर थियो । सामान्यतः ४० हप्तामा जन्मिनुपर्नेमा उनको जन्म मात्र २५ हप्तामा भएको थियो । टाइनिएस्ट बेबी रजिस्ट्रीअनुसार यसअघि सन् २०१८ मा अमेरिकामा २४५ ग्राम तौल भएकी शिशुको जन्म…विस्तृत समाचार »
​श्रीमतीलाई बिना मेकअप देखेपछि बिहेको भोलीपल्ट श्रीमानले दिए उजुरी....
एजेन्सी । विवाह फरक फरक ठाँउमा फरक किसिमले गर्ने गरिन्छ विवाहको दिन बेहुलि निकै सुन्दरी देखिने गर्दछन् । त्यस्तै विवाहमा सुन्दरी देखिएकी युवति भोलि पल्ट भने पतिको तगारो बनेकी छिन् । यो घटना हो अल्जेरियाको एक युवले बिहे त गरे तर उनले नसोचेको घटना भयो । बिहेको भोलिपल्ट उनको लागि कालो दिन नै हुन पुग्यो । उनले विवाहको दोस्रो दिन आफ्नो पत्नीलाई देखेर विश्वासै गर्न…विस्तृत समाचार »
टेलिभिजनमा समाचार वाचन गर्दागर्दै प्रस्तोताको दात खुस्किएपछि.........
एजेन्सी । एक युक्रेनी टेलिभिजन प्रस्तोता मारिच्का पाडाल्कोको टेलिभिजनमा बोल्दाबोल्दै दाँत झरेको छ । त्यसपछि उनले सम्हालिएर रिपोर्ट प्रस्तुत गरिन् तर दाँत झरेको कुरा अरुले थाहा पाए । उनले कसैलाई नढाँटी आफ्नो ईन्स्टाग्राममा पोष्ट गरिन् र भनिन्, ‘मैले समाचार पढेको २० वर्ष भयो तर यस्तो अचम्मको अनुभूति पहिलो पटक भयो ।’भिडियोमा उनले समाचार पढ्दापढ्दै दाँत अलि तल झरे पछि हातले छोपेर दाँत व्यवस्थापन गरेको देख्न…विस्तृत समाचार »